April 24, 2021 - ApannPyay Media
ဆံပင်ကျွတ်တတ်တဲ့သူတွေ ခေါင်းလျှော်ရင် ဘယ်လိုလျှော်ရမလဲ
April 24, 2021 by ApannPyay Media
ဆံပင်ကျွတ်တတ်တဲ့သူတွေ ခေါင်းလျှော်ရင် ဘယ်လိုလျှော်ရမလဲ ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းဆိုတာက လူတိုင်းနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတာပါ။လူတစ်ယောက်ကတစ်နေ့ကို ဆံပင် ၁၀၀ လောက်ကျွတ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဆံပင်ကျွတ်တာကလည်း ခေါင်းလျှော်တာနဲ့သက်ဆိုင်မှုရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒီတော့ ခေါင်းဘယ်လိုလျှော်မလဲဆိုရင် ဒီတိုင်းလျှော်မယ်ပဲဖြေမိကြမှာပါ။တကယ်က ဆံပင်မကျွတ်အောင် ခေါင်းလျှော်တဲ့အခါမှာ ဂရုစိုက်သင့်တာလေးတွေရှိပါတယ်။ဘာတွေ ဂရုစိုက်ရမလဲဆိုတာကို ဖော်ပြပေးပါမယ်။ ၁ — ခေါင်းလျှော်ရည်နဲ့ ဆံပင်ပျော့ဆေး (သို့) ပေါင်းဆေး အသုံးများခြင်း ခေါင်းလျှော်ရည်နဲ့ ဆံပင်ပျော့ဆေး များများသုံးတာက ဆံကေသာကို ပိုပြီး ကောင်းမွန်ပျော့ပြောင်းစေတယ်လို့ထင်မိကြပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမယ့် အများကြီးသုံးရင် ဆံကေသာကိုထိခိုက်နိုင်တဲ့ အတွက် ဆံပင်ကျွတ်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါမလို့ အတော်အသင့်လောက်ပဲအသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ ၂ — ရေနွေးနဲ့ခေါင်းလျှော်ခြင်း လူတချို့က ရေနွေးနဲ့ ခေါင်းလျှော်တတ်ကြပါတယ်။ရေနွေးနဲ့ခေါင်းလျှော်ပြီးရင် ခဏကြာတဲ့အခါမှာ လူကို အိပ်ပျော်စေနိုင်ပါတယ်။ရေနွေးနဲ့ခေါင်းလျှော်လိုက်ရင် ဆံပင်ပေါက်စေနိုင်တဲ့ Follicles တွေကိုသေစေနိုင်တာမလို့ ဆံပင်ကျွတ်တာတွေ ဆံပင်ပါးတာတွေဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါမလို့ ရေနွေးနဲ့ခေါင်းမလျှော်သင့်ပါဘူး။ရေအေးဒါမှမဟုတ် ရေအေးနဲ့ ရေနွေးမျှတစွာရောစပ်ထားတဲ့ ရေနဲ့ပဲလျှော်ပေးသင့်ပါတယ်။ ၃ … Read more
ကလေးပေါင်ဒါရဲ့ ဘက်စုံအသုံးဝင်မှုများ ကလေးလေးတွေ အတွက် သုံးစွဲလေ့ရှိတဲ့ ပေါင်ဒါတွေက အသားအရည် ထိခိုက်မှုလည်းမရှိသလို အနံ့လေးက အစ သင်းပျံ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးပေါင်ဒါကို ကလေးတွေအတွက် ပဲ လိမ်းတာမဟုတ်ဘဲ ထိခိုက်လွယ်အသားအရေ ပိုင်ရှင်တွေအနေနှင့် လည်း အမွှေးအကြိုင်တစ်ခုအဖြစ် ထပ်မံ သုံးစွဲနိုင်ပါသေးတယ်။ဒါဆိုရင် ကလေးပေါင်ဒါက ကလေးတွေအတွက် အမွှေးအကြိုင်တစ်ခု ထပ်ပိုပြီး ဘယ်နေရာတွေမှာ သုံးစွဲ လို့ ရနိုင်သေးလည်းဆိုတာကို ပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့ ဖတ်ရှုလိုက်ကြပါဦးနော်။အနံ့ဆိုးထွက်နေတဲ့ နေရာတွေမှာ သုံးနိုင်ခြင်း အိမ်တိုင်းမှာ ဆောင်ထားသင့်တယ်အရာ တစ်ခုဆိုရင် တော့ ကလေးပေါင်ဒါကိုပဲ ညွှန်းရမှာပါပဲ။ အနံ့ဆိုးတွေ ထွက်လာတဲ့ အခါမျိုးတွေမှာ အဲ့ဒီ့နေရာတစ်ဝိုက် ကလေးပေါင်ဒါကို ခပ်နိုင်နိုင် ဖြူးပေးပြီး အနံ့အသက်ဆိုးတွေ ပျောက်ကင်းအောင် လုပ်နိုင်ပါတယ်။နောက်ထပ် အသုံးဝင်တဲ့ နေရာတစ်ခုကတော့ ဖိနပ်တွေမှာ အနံ့အသက်ဆိုးတွေ ထွက်နေတဲ့ အခါမှာဖိနပ်ထဲကို … Read more
ဆား နဲ့ သကြားလျှော့စား
April 24, 2021 April 24, 2021 by ApannPyay Media
ဆား နဲ့ သကြားလျှော့စား အစားအစာများကို ချက်ပြုတ်တဲ့အခါမှာ နဲ့ ပြင်ဆင်တဲ့အခါတွေမှာ ဆား (ဆိုဒီယမ်) ပါဝင်မှုမြင့်မားတဲ့အရာများ (ဥပမာ – ပဲပိစပ် နှင့် ငါးငံပြာရည်) တို့ကို လျှော့၍ထည့်ပါ။ ဆား နှင့် သကြားဓာတ်များတဲ့ အစားအစာများ (ဥပမာ – အဆာပြေသားရေစာမုန့်များ) ကိုရှောင်ပါ။ အချိုရည်များ (သို့မဟုတ်) ဆိုဒါ နှင့် သကြားဓာတ် မြင့်မားသော အခြားအချိုရည်များ (ဥပမာ – သစ်သီးဖျော်ရည်များ၊ သကြားရည်နှင့် အနံသာထည့်ထားသော နို့များ) ကို ကန့်သတ်သောက်ပါ။ ကွတ်ကီး၊ ကိတ်မုန့် နှင့် ချောကလက်စသည့်ချိုသောအစာအစားများ စားမည့်အစား လတ်ဆတ်သည့် သစ်သီးများကိုရွေးချယ်စားပါ။ ဘာကြောင့် လျှော့စားသင့်တာလဲ ? ဆိုဒီယမ်ဓာတ် (ဆားအပါအဝင်) မြင့်မားစွာ ပါ၀ င်တဲ့ … Read more
နို့ကင်ဆာလက်တွေ့ပျောက်ဖူးသူ ဒီအပင်ကို ဘိစပ်ပင်လို့လဲ ခေါ်ပါတယ်။ ဘိစပ်က အပင် အရွက်ကြီးတဲ့အပင်တစ်မျိုးရှိနေသေးလို့ ဒီဘိစပ်ကိုတော့ ဘိစပ်ငယ်လို့ပဲ ခေါ်စေချင်ပါတယ်။ အခု မိုးရာသီမှာ နေရာတိုင်း ပေါက်နေလို့ အလွယ်တကူ ယူသုံးနိုင်တယ်။ မိတ်ဆွေတစ်ဦးက ပြောပြလို့ သိရတာပါ။ သူ့ရဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ဦးရဲ့မိန်းမမှာ နို့ကင်ဆာအဖုကြီးတက်နေတော့ စိုးရိမ်စရာရှိလို့ သူငယ်ချင်းက သူ့ကိုပြောပြတဲ့အခါ သူက ကြားဖူးထားတော့ ဒီဘိစပ်ငယ်ကို အပင်ရော အရွက်ပါ လက်တစ်ဆုပ်ခန့် ကြေညက်အောင်လုပ်ပြီး အနာကိုအုံပေးဖို့ နည်းပေးခဲ့ပါတယ်။ နောက်တစ်လကြာတော့ သူ့သူငယ်ချင်းနဲ့ပြန်ဆုံတဲ့အခါ သူငယ်ချင်းက သူ့မိန်းမရဲ့ နို့ကင်ဆာအဖုကြီးပျောက်ကြောင်း ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာ ကျေးဇူးတင်စကားပြောခဲ့ပါတယ်။ ဘယ်ရက် ဘယ်နေ့တုန်းက ရောဂါပျောက်ခဲ့သလဲ, ဘယ်လောက်ကြာအောင် ကုခဲ့ရသလဲဆိုတာကိုတော့ သူ့သူငယ်ချင်းကို မမေးမိလိုက်လို့ မသိခဲ့ပါလို့ ကျွန်ုပ်ကို ပြောပြပါတယ်။ ခန့်မှန်းကြည့်တာကတော့ တစ်လမကြာဘဲ ၁ဝရက်ကျော် ၂၀ … Read more
ပိန္နဲသီးအစေ့ အရက်ဖြတ်ဆေး ပိန္နဲသီး အိမ်မာဖြစ်စေ အိမ်ပျော့ဖြစ်စေသုံးလို့ ရပါတယ်။ အရက်နာကျနေပါက ပိန္နဲသီးအစေ့တစ်ဆယ်ကျပ်သားကိုအခွံနွှာရေဆေးပါ။ ရေကိုအကြမ်းပန်းကန်လုံး( ၅ ) လုံးထည့်( ၂ )လုံးကျန်အောင်ကြိုပါ။ သောက်တဲ့အခါနံနက်အကြမ်းပန်းကန်၁လုံးlညအကြမ်းပန်းကန်တစ်လုံးသောက်ပေးပါ။ အရက်နာကျတာသက်သာပျောက်ကင်းစေပါတယ်။ ။ အရက်ဖြတ်လိုပါက ဒီပိန္နဲသီးအစေ့ပြုတ်ရည်ကိုပဲနေ့စဉ်နံနက်ညပုံမှန်သောက်သွားရင်အရက်သောက်ခြင်စိတ်မရှိတော့ပါဘူးတဲ့။ လေပြိုတဲ့အချိန်မှာပိန္နဲသီးအရည်ကိုသောက် ထမင်း ကိုအဝသာစားထားလိုက်ပါ။ အရက်ကို အနံ့ကိုတောင်မခံချင်တော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ လွယ်ကူတဲ့အရက်ဖြတ်နည်းလေးကိုမျှဝေပေးလိုက်ပါ တယ်ဗျာ။။ Credit – Shwe La Thar Win Cb. .. မှာမေးထားလို့်ရှာဖွေတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ Via-Sai Min Thant ပိႏၷဲသီးအေစ့ အရက္ျဖတ္ေဆး ပိႏၷဲသီး အိမ္မာျဖစ္ေစ အိမ္ေပ်ာ့ျဖစ္ေစသုံးလို႔ ရပါတယ္။ အရက္နာက်ေနပါက ပိႏၷဲသီးအေစ့တစ္ဆယ္က်ပ္သားကိုအခြံႏႊာေရေဆးပါ။ ေရကိုအၾကမ္းပန္းကန္လုံး( ၅ ) လုံးထည့္( ၂ )လုံးက်န္ေအာင္ႀကိဳပါ။ ေသာက္တဲ့အခါနံနက္အၾကမ္းပန္းကန္၁လုံးlညအၾကမ္းပန္းကန္တစ္လုံးေသာက္ေပးပါ။ အရက္နာက်တာသက္သာေပ်ာက္ကင္းေစပါတယ္။ ။ … Read more
ဆန်ဆေးရည်တွေ မသွန်ပြစ်နဲ့နာ် ဝက်ခြံ တင်းတိပ် မှဲ့ခြောက် နှင့် အရေးအကြောင်းများကို ပျောက်အောင် လုပ်လို့ရတယ်
ဆန်ဆေးရည်တွေ မသွန်ပြစ်နဲ့နာ် ဝက်ခြံ တင်းတိပ် မှဲ့ခြောက် နှင့် အရေးအကြောင်းများကို ပျောက်အောင် လုပ်လို့ရတယ် ထမင်းချက်ဖို့ ဆန်ဆေးတဲ့အခါ သွန်ပစ်လေ့ရှိတဲ့ ဆန်ဆေးရည်မှာ မျက်နှာကို ကောင်းမွန်စေတဲ့ အာနိသင်များစွာ ပါရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဆန်ဆေးရည်ရဲ့ မျက်နှာကို ကောင်းမွန်စေတဲ့ အာနိသင်တွေ အကုန်ရရှိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ ဆန်ဆေးရည်နဲ့ မျက်နှာသစ်ပေးလို့ ရပါတယ်။ ဆန်ဆေးရည်နဲ့ မျက်နှာသစ်မယ်ဆိုရင် ဆားဝက်ခြံတွေကို ဖယ်ရှားလိုက်တဲ့အခါ ကျန်ရှိနေမယ့် ချွေးပေါက်ကျယ်ခြင်းတွေကို လျော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ ဆန်ဆေးရည်မှာ ပါဝင်တဲ့ အာနိသင်ဓါတ်တွေဟာ မျက်နှာနီရဲခြင်းနဲ့ မျက်နှာစပ်ဖျဉ်းဖျဉ်း ဖြစ်ခြင်းတွေကို မဖြစ်စေနိုင်ပါဘူး။ မျက်နှာ အသားအရေ ညက်ညောစေဖို့အတွက် အင်ဇိုင်းဓါတ်တွေ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလို အင်ဇိုင်းဓါတ်တွေကို ဆန်ဆေးရည်မှ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ဆန်ဆေးရည်နဲ့ မျက်နှာသစ်ခြင်းဟာ ဝက်ခြံ၊ တင်းတိပ်တွေကို သက်သာစေပြီး အရေးအကြောင်းတွေနဲ့ … Read more
ညဘက်တိုင်း ခွေးတွေ ဟောင်နေလို့ CCTV တပ်ကြည့်လိုက်သောအခါ နွားပိုင်ရှင် တစ်ယောက်ဟာ ညညဆို ခွေးဟောင်သံတွေ ကြားနေရတာ ရက်အနည်းငယ် ရှိပါပြီ။ ဒါကြောင့် သူဟာ cctv ကင်မရာတပ်ပြီး စောင့်ကြည့်ခဲ့တဲ့ အချိန်မှာ မယုံကြည်နိုင်စရာ အဖြစ်အပျက်တစ်ခုကို တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ သူ့ကင်မရာမှာ ကျားသစ်တစ်ကောင်ကို မြင်လိုက်ရတာပါပဲ။ ကျားသစ်ဟာ ညအချိန်မှာ သူ့နွားဆီကို ရောက်လာတာပါ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ ထင်နေကြသလို နွားကို စားဖို့ လာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ cctv မြင်ကွင်းမှာ နွားဟာ ကျားသစ်ကို လျှာနဲ့ လျက်ပေးနေပြီး ကျားသစ်ကလည်း ငြိမ်ငြိမ်လေး ရှိနေတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နွားပိုင်ရှင်က အရင်နွားပိုင်ရှင်ကို မေးကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ အကြောင်းစုံကို သိခဲ့ရပါတယ်။ ကျားသစ် ကလေး ရက် ၂၀ … Read more
သင့်ဖူးစာရှင် ဘယ်သူလည်း သိချင်ရင် ဒီနည်းအတိုင်း စမ်းကြည့်ပါ
သင့်ဖူးစာရှင် ဘယ်သူလည်း သိချင်ရင် ဒီနည်းအတိုင်း စမ်းကြည့်ပါ မိမိရဲ့ဖူးစာရှင်ကိုကြိုတင်တွေ့ဖူးချင်ကြတာဟာ လူတိုင်းပါပဲ…။ ဒါကြောင့် အိပ်မက်ထဲမှာ ဖူးစာရှင်ကိုတကယ်ပဲ မြင်ရမလားဆိုတာ သိရအောင် ကြားဖူးတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေ မျှဝေပေးလိုက် ပါတယ် …။ ပထမဆုံးဗေဒင်ဆရာအချို့ပြောပြတဲ့နည်း လမ်းလေးကတော့ ဥတစ်လုံးကြက်သွန်ဖြူ သုံးလုံးကို ဆားရေနဲ့ပြုတ်ပေးရမယ်တဲ့။ ပြီးတဲ့ အခါ ကျက်သွားတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူတွေကို တဝက်စီကိုက်စားလိုက်ပါ …။ ကျန်တဲ့ဟာတွေကို ခေါင်းအုံးအောက်မှာထည့်ထားပြီး မအိပ်ခင် မှာ နှင်းဆီရနံ့ရေမွှေး ကိုဆွတ်ပီးမှအိပ်ပါတဲ့။ စမ်းလုပ်ကြည့်ပေါ့နော် …။ နောက်တစ်နည်းကတော့ရိုးရှင်းလွယ်ကူတဲ့ နည်းလမ်းလေးပါ ဆန်စေ့(၇)စေ့ကိုခေါင်းအုံး အောက်မှာထားပြီး ဖူးစာရှင်ကိုမြင်မက်အောင် သေချာဆုတောင်းပြီးအိပ်တာပါ …။ ပြီးတော့ Kiss me quick ပန်းတွေနဲ့လုပ်တဲ့နည်း လည်းရှိပါသေးတယ်…။မနက်ကတည်းက အဲ့ဒီပန်းတွေကို ပန်းကန်ပြားလေးပေါ်မှာ ထည့်ထားပြီး စင်ပေါ်တင်ထားပါ…။ညဘက် အိပ်ခါနီးကျမှ ခေါင်းအုံးအောက်ကိုထည့်ပြီး သေချာဆုတောင်းပြီးအိပ်ပါတဲ့ … Read more
ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ဆံပင်စည်းနည်းပုံစံတွေ
ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ ဆံပင်စည်းနည်းပုံစံတွေ ခေါင်းကိုက်ခြင်းက အ​ကြောင်း အမျိုးမျိုး​ကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှု၊ ​သွေးတိုးခြင်း၊ ရာသီဥတု အ​ခြေအ​နေ စတဲ့အ​ကြောင်းအချက်​တွေ​ကြောင့် ​ခေါင်းကိုက်နိုင်ပါတယ်။ ဆံပင်စည်း​နှောင်တဲ့ ပုံစံ​​ကြောင့်လည်း ​ခေါင်းကိုက်နိုင်ပါတယ်။ တချို့ ဆံပင်စည်းတဲ့ပုံစံက ဦး​ခေါင်းခွံကို ဖိအားသက်​​ရောက်​စေပြီး နာကျင်​​​စေပါတယ်။ ၄။ ပိုနီ​​တေးလ် ဆံပင်ရဲ့​ မွေးညင်း​ပေါက် ​အောက်က​နေရာနဲ့ ဦး​​ရေပြားနေရာ​တွေမှာ အကြမ်းမခံနိုင်တဲ့ နာဗ်​ကြော​လေး​တွေ ရှိပါတယ်။ အဲဒီ နာဗ်​​ကြော​လေး​တွေက နာကျင်မှုကို ခံစားနိုင်ပါတယ်။ ပိုနီ​တေးလ် ဆံပင်စည်းနည်းက နာဗ်​​ကြော​ပေါင်းများစွာကို ချက်ချင်း တင်းသွား​​စေပါတယ်။ မိန်းက​လေး​ တော်​တော်များဟာ ပိုနီ​တေးလ် ဆံပင်စည်းပြီး​နောက် ​ခေါင်းကိုက်ခြင်းကို ခံစားရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ၃။ ​နဖူးစည်း နဖူးစည်းကို ဖက်ရှင်အ​နေနဲ့ စည်းကြပါတယ်။ နဖူးစည်းကို တင်းတင်းကြပ်ကြပ်နဲ့ အချိန်ကြာကြာ စည်းထားမယ်ဆိုရင် … Read more
မိန်းကလေးတွေ ဝေးဝေး ရှောင်သင့်တဲ့ ယောကျင်္ားညံ့ ( ၆ ) မျိုး
မိန်းကလေးတွေ ဝေးဝေး ရှောင်သင့်တဲ့ ယောကျင်္ားညံ့ ( ၆ ) မျိုး ဘယ်လောက်တောင်ပဲ လန်းနေနေ၊ မိုက်နေနေ လုံးဝ မပတ်သင့်တဲ့ ယောကျင်္ားမျိုးတွေ ရှိပါတယ်။ ကိုယ့်အနားမှာ ဒီလို လူမျိုးတွေက မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းအဖြစ် ရှိနေရင် မိတ်ဆွေ ဆက်ဆံရေး အတိုင်းပဲ ထားပါ။ လုံးဝကို ကိုယ့်ဘဝထဲ၊ ကိုယ့်နှလုံးသားထဲ အဝင်မခံပါနဲ့။ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ အနေနီးပြီး စိတ်ယိမ်းယိုင် တာမျိုး မဖြစ်ရအောင် ရှောင်ပါ။ သင် လုံးဝ ရှောင်သင့်တဲ့ ယောကျင်္ား အမျိုးအစားတွေကတော့… 1) ချစ်သူရှိနေပီးသူ ဘယ်လောက်ပဲ လန်းနေနေ၊ တော်နေနေ လုံးဝ ရှောင်သင့်တဲ့ ယောက်ျား အမျိုးအစားထဲမှာ ဒီလို လူမျိုး ပါပါတယ်။ ချစ်သူ ရှိနှင့်နေပြီး ဖြစ်တဲ့ ယောက်ျားမျိုး … Read more